Accueil > Gazetin'ny nosy > Véronique Vouland : Mbola manao toe-tsaina mpanjana-tany hatrany
Véronique Vouland : Mbola manao toe-tsaina mpanjana-tany hatrany
Malagasy maro ankehitriny no manaraka ny ady tanin’i Lola Rasoamaharo sy ny ambasadaoron’i Frantsa etsy Ivandry mahakasika ny fandravana tamboho izay teren’ity ambasadaoro ity hatao amboletra.
Omaly alatsinainy faha 15 jolay 2019 dia efa nisy ny lahatsoratra natao tamin’ity raharaha ity izay mitondra ny lohateny hoe « misolelaka any amin’i Veronique Vouland ingahy Ravalomanana Marc ».
Taorian’izany dia nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny « Préfet de police » eto Antananarivo. Nanambara ity olona ity fa nanamafy ny fanapahan-kevitra ny kaominina andrenivohitra eto Antananarivo izy ireo satria nanaraka ny fepetra takian’ny lalàna ny tsy fandravana ny fefy.
Ravalomanana Marc izay misolelaka amin’ity ambasadaoran’i Frantsay ity dia sady mivoaka no miditra fa mampiasa ny hafetseny fotsiny eo anatrehan’i Véronique Vouland. Antony dia mampirisika an’i Véronique Vouland izy hanao ny fandravana nefa ampanarahany lalàna na « procédure » ara-dalàna ny raharaha. Dia miesona eo ity ambasadaoro ity. Mazava fa fantatr’ingahy Ravalomanana Marc tsara fa tsy azo ravana io fefy io fa ampidiriny kizo ity ambasadaoro ity ka dia manaonao foana izao.
Ny zava-misy ankehitriny dia manome rariny an’i Lola Rasoamaharo amin’ny fanarahany lalàna ingahy Préfet de police. Fantatra koa izao fa mbola nanome rariny ny tompon’ny tamboho koa ny minisitra ny Raharaham-bahiny. Ny ministeran’ny Fanajariana ny tany dia efa nandinika ity raharaha ity koa ka naka ny hevitra ny ministeran’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny. Tamin’izany no nahafantarana fa tsy misy fahadisoana akory ny nataon’ny tompon-tany fa nangataka ny hisian’ny fifanarahana fotsiny izy ireo.
Eo anatrehan’izany dia milaza indray ramatoa Véronique Vouland fa misy ny antsoina hoe « incidence diplomatique » ity raharaha ity.
Izany ilay toe-tsaina mpanjana-tany izay lazaina ery ambony ataon’i Véronique Vouland.
Ambetitenin’ny haino aman-jery maro isan-karazany ity fomba fanaparam-pahefana ataon’ny ambasadaoron’i Frantsa ity ankehitriny. Milaza ny zavatra tsy mety ataony ary mitsikera hatramin’ny zavatra nataony teto Madagasikara koa. Resahan’ny olona hatramin’ny raharaha « Iles Eparses » izay nanaovan’ity ramatoa ity fanambarana koa aza.
Fanerena inona indray no hataon-dramatoa Véronique Vouland manomboka izao satria tapi-dalan-kaleha tanteraka izy ankehitriny.
Ny fiandrianam-pirenena iray dia ny fanajana ny mponina sy ny lalàna misy ao aminy. Mino izahay fa tsy hanao toa izao ny ambasadaoro Malagasy any Frantsa.